Chiye Glass Beads China Manufacturers & Suppliers & Factory
Chiye Glass Beads - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Chiye Glass Beads)
Intermix (Premix) Vorona glasy ho an'ny fanoratana lalana Mandritra ny famokarana sary hosodoko, esory ny kofehy fitaratra amin'ny loko mifototra amin'ny tahan'ny 18-25% (lanjany isan-jato), mba hahafahan'ny loko eny an-dàlambe manohy ny fandinihana mandritra ny akanjo sy ny fahasosorana. Ny...
Standard Glass Beads AUSTRIANA TYPE A
Ity fepetra ity dia mamaritra ny fepetra ilaina sy ny rafitra ho an'ny perla vita amin'ny ravina manana traikefa miverimberina, izay natao hanamboarana fitaovana famokarana marika. Izy io dia ampiharina amin'ny kofehy vita amin'ny gasy mba hanatsarana ny fahitana ny fitaovana fametrahana pavement...
AS / NZS CH-003 TYPE D Glass Beads
AS / NZS CH-003 TYPE D Glass Beads Standard Standards TYPE D Glass Beads Ity fepetra ity dia mamaritra ny fepetra ilaina sy ny rafitra ho an'ny perla vita amin'ny ravina manana traikefa miverimberina, izay natao hanamboarana fitaovana famokarana marika. Izy io dia ampiharina amin'ny kofehy vita amin'ny...
Kitapo mivalona mikararana ho an'ny lalana BS6088
Antalony Glass Beads & Glass Glasses Premix Mandritra ny famokarana ny loko eny amoron-dalana dia alamino ny kofehy fitaratra amin'ny loko eo amin'ny 18-25% (lanjan'ny isan-jato). Aorian'ny fampiharana ny loko toy izany amin'ny asa an-dàlana, ny loko dia afaka mitazona ny fisaintsainana...
High Roundness Glass Beads
Ny Chiye Glass Bead (Hebei) Co., Ltd, izay natsangana tamin'ny taona 1998, no lehibe indrindra sady mpamatsy angovo fitaratra ho an'ny taratra reflectivity ao Shina ankehitriny. Mipetraka any amin'ny tanànan'i Langfang izay 50 kilometatra lavitra any atsimo atsinanan'i Beijing, ary manodidina ny...
High Glass Glasses Reflective Performance
High Glass Glasses Reflective Performance Ireo labozia vita amin'ny vera dia avo loko marevaka avo loko. Manao fikarohana sy fikarohana isan-karazany izahay mba hamaritana ny hatsaran'ny vokatra tsara indrindra. Ankoatr'izany, ireo kavina ireo dia novolavolaina tamin'ny fomba henjana hifehezana ny...
JIS R3301 Standards Silan / silicon kavina vita amin'ny rongony
Pikantsary fanenon-jiro Physique et chemie fonctionnaire Item Standard Result Specific gravity(g/cm3) 2.4--2.6 2.54 Refractive index ≥1.5 1.52 Spherical beads
Aashto-M247 Standards Screen Glass Glasses
Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony noho ireo glasy vita amin'ny gilaika ara-panandramana miaraka amin'ny fihodinam-bokatra sy ny halavany. Ary...
Chiye Glass Beads Chiye glass beads High Glass Beads Micro Glass Beads Gass Beads Endrika Glass Beads Reflective Glass Beads American Glass Beads